माया मौलाउने झरीको याम – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
माया मौलाउने झरीको याम
२०७१ श्रावण २०, मंगलवार ०२:०० गते
साउन, झरीको याम । झरीले गाउँको देउरालीमा एकोहोरो पीपलका पात बजाइरहेको छ । बारीका फाँटहरुमा धानका बीउ हरियो गलैँचा बिछ्याएजस्ता भएका छन् । अनि, सात रंग छर्दै दुई धु्रव जोडिरहेको छ इन्द्रेणीले । रमाइलो वातावरणमा झरीका भ्यागुता ट्वारट्वार गर्दै कराइरहेका छन् । जूनकीरी झिमिकझिमिक उज्यालो छर्दै छमछम नाचेकी छन् । रूझेको माटो र मानव मन दुवैमा मिठास छ । प्रकृति कलात्मक सिर्जनामा व्यस्त नै छिन् । सिमसिम पानी र घाम पर्दा हुने स्यालको विवाहले झरीका मनहरुलाई मादकता थपेको छ ।
यतिबेला असारमा रोपिएको बारीको हरियो रोपोमा बैँस पलाउँदै छ । जूनकीरी र भ्यागुताहरु पनि बैँसमा लडीबुडी खेल्छन्, यो झरीमा । फूलहरु झरी, बतास सहेर पनि सुगन्ध छरिरहेको हुन्छ, यो बेला । माया मौलाउने झरीको याममा बैँसका पुतलीहरु त जोडी बनेर डेटिङमा पुगेका हुन्छन् भने मानव मनहरु त झन् भन्नै पर्दैन ।
यो बेलामा त घामपानीजसरी प्रेमीप्रेमिका सँगै हुनुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । जिन्दगीमा एउटै गोरेटोमा हिँडाउने वाचा गरेका युगलले झरीको एउटै छातामा आत्मीयता देखिरहेका हुन्छन् । सिमसिमे पानीमा हात समातेर हिँडेका युगललाई ऊर्जा थप्छ, झरीले । यही ऊर्जामा लुटपुटिन्छन् र बेइमानी नगर्ने वाचा बाँध्छन् जोडीहरु ।
माया मौलाउने साउने झरीको याममा रूझेका शिव अधिकारी गीतमै लेख्छन् ः
‘झरीले निथ्रुक्क भिजेको बेला
तिमी भए कस्तो हुन्थ्यो ?
शरीर सबै रूझेको बेला’
वा वा ! यो झरीले शिवलाई तिमी चाहिरहेको छ । किनकि, उसको शरीर रूझेको छ । शरीर रूझेको बेला मायालुको खाँचो पर्छ रे ! साउने झरीमा प्रेमीप्रेमिका सँगै हुनुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । यही बेला त हो, युगल प्रेमीले साथ खोज्ने । त्यसैले साउने जोडीहरु भन्छन् ः
‘साउनको झरी बनी
तिमी आऊ न
मेरो मनको अँधेरीमा
जून छाऊ न ।’
रूझेर लाएको माया सायदै बिर्सिइन्छ । युगलले झरीको एउटै छातामा ओतिएर आत्मीयता साट्नुको फरकपन र मायालुको मिठासपन अन्त कहाँ पाउँछ र ?
असारमा रोपेको रोपोजस्तो माया मौलाउँछ साउने झरीमा । साउने बर्षाद्ले सालका पातमा तपतप पानी पार्दा मायालुको जोडीले त्यसैलाई मीठो संगीत मान्दै प्रेमका अनुरागहरु बाँडेका हुन्छन् । सिमसिमे पानीमा बेइमान नगर्ने वाचा बाँधे पनि कहिलेकाहीँ ज्यानले बेइमान पनि गरिदिन्छ । रूझाइको प्रेमको बेइमानीलाई युगलले सामान्य मान्छन् र भन्छन् ः
‘आयो रूझाएर गयो बेइमानी
केके ग¥यो केके ग¥यो,
पानी–पानी भयो मेरो मन पनि !’
भनिन्छ, असारमा दूबो र साउनमा माया मौलाउँछ रे । यो समयमा त काँक्रो, करेला, सिस्नो र फर्सीको डुकुले समेत पिरती गाँसेका हुन्छन् रे । यो हरियो महिनामा हरियो माया गाँस्नुपर्छ रे । वनस्पतिले समेत झरीमा रूझेर भए पनि माया गाँसेका हुन्छन् रे । यही सोचेर होला, युवा जमात झरीसँगै माया साटासाट गरिरहेका छन् ।
भरतपुर–१० का कमल श्रेष्ठले ५ वर्षअगाडि साउने झरीमा गुटमुटिएर प्रेमिकासँग माया साटासाट गरेको पललाई सम्झने गरेका छन् । उनी भन्छन् ः ‘अहिले जवानी गए पनि त्यो बेलाको साउने झरीको मायालाई भुल्न सकिन्न । झरीमा रूझेर लाएको मायाको गाँठो सितिमिति फुस्कँदैन ।’ उनको बुझाइमा मायालुलाई नजिक पार्ने गतिलो मौसम हो यो ।
साउन महिना खेतीपाती सकेर आराम गर्ने समय हो । असारे चटारोजस्तो हुँदैन यतिबेला । त्यसैले, साउनलाई पारिवारिक मिलनको मौका पनि मानिन्छ । खेतमा व्यस्त हुने जेठा अब जेठीको साथमा, माइला अब माइलीको साथमा, पिँढीमा बसेर बलेनीमा झरेको पानीसँगै मायालु पल बिताउँछन् । बलेनीको पानी अँजुलिमा लिएर छ्यापाछ्याप गरी उमेरमा लगाएको प्रेमलाई सम्झन्छन्, उनीहरु ।
‘झरीमा लगाएको त्यो प्रेमका पलहरुलाई कहाँ बिर्सन सकिन्छ र, मानसपटलमा आइरहन्छ !’– नारायणगढका पदम भट्टले भने । झरी, पछ्यौरी र जेबी रूमाल’ शीर्षकको केबीएसको कविताले यो कुरालाई झन् पुष्टि गर्छ ।
‘म बिर्सूं कसरी
आगो बालेको रात
जेबी रूमाल र जिन्दगी
एकसाथ निचोरेको रात !’
यतिबेला एसएलसी पास गरेर भर्खर कलेज जान थालेका किशोरकिशोरीमा नयाँपन आउँछ । उनीहरु एउटै छातामा ओतिएर आफ्नो मायालुसाथ झरीको बयान गर्न रूचाउँछन् । भर्खर कलेज लाइफमा जानेहरु यही साउन महिनामा झरीसँगसँगै मायाका मालाहरु बुन्न थाल्छन् । माला बुन्नलाई नपुगेको दुई–तीन थुँगा फूल यही बेलामा फुलाउँछन् कलेजका ठिटाठिटीहरु ।
साउनको विशेषता फेरि कतिबेला दरर्र पानी पर्छ, थाहा नै हुँदैन । कलेज जाँदा बाटोमा पानी पर्दा युवतीको छातामुनि ओतिन जान्छन् युवक । अनि त के चाहियो र ! दुवैको मादकताको पारो त एक्कासि उकालो चढिहाल्छ । झननन गरी करेन्ट लाग्न थालिहाल्छ । त्यहीबेला युवक यसो भन्दै युवतीलाई जिस्काइ पनि हाल्छन् ः ‘छाता ओझेल पारिदेऊ बर्खे झरीमा ।’
साउनमा इन्देणीको रंगसँगै जीवनमा पनि उत्साह र उमङ्गको रंग चढ्छ । क्षितिजमा चढेको सप्तरंगीले जोडीलाई पनि रंगीन बनाउँछ । तर, कुनै बेला साउने झरीमा गाँसेको मायालाई भदौरे भेलले बगाउन पनि सक्छ नि ! साउनमा झरेको बर्षाद्मा रूझेर सालको बोटमुनि बसेर गाँसेको मायालाई भदौको भेलले सजिलै बगाइदियो भने झरीको मायाको अर्थ हुँदैन ।
रचना जिसीले ‘साउने खोला उर्लेर आउँदा, माछा मार्नु दुवाली छेकेर’ भनिरहँदा कतिपय युवाले मायाका बगरहरु यही साउने खोलाले भिजाएका छन् । मायाका दुवालीहरुलाई भदौरे भेलबाट जोगाउन सकियो भने यसपटकको साउने झरी फलदायी बन्नेछ ।
लाजले व्यर्थै किन छोपेकी’
राम थापाले यो गीत त्यसै बनाएका होइनन्, रूझेको मायालु कसैको पर्खाइमा पनि छिन् यो साउने झरीमा ।
ग्लोवल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनले ऋतु परिवर्तनको चक्रलाई बिथोलेजस्तै मायाको चक्रमा पनि धोकाधडी र बेइमानी कतैकतै देखिएको छ । कतैकतै नारायणगढका भित्री सडकमा भरिएको पानी गाडीले छ्याप्दा बिग्रेको कपडाजस्तै भएका छन्, मायाको झरीमा रूझ्नेहरु ।
‘साउने झरीमा लाएको मायालाई भदौरे भेलले लैजान सक्छ’, एक युवकले थपे, ‘त्यसैले झरीको माया झरी परून्जेललाई मात्र हो नि !’
इस्लामाबाद, १० माघ । पाकिस्तानमा रेलको ठक्करबाट एक युवाको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले शनिबार जानकारी दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल...